Ummanii Ethiopia yeroo amma kana nyata barbada moo Nuclear miti !!! Ethiopia Nuclear is dangerous for all
Abidan hin xabatiina !!!
Sabani Ethiopia milliona 20 ol utuu beelan dhumchaa jiru, horiin millionati lakawamu bishan dhabee dhumaa jiru. Da’iimi utuu harma hadha goggaa hotuu du’aa jirtu. Mootummaan Mafia Tigire rakkoo uummata kana Adunya irra dhoksee mallaaqa Adunya irra argatuun Warsha Kemikala nama fixuu fi Nuclear Adunya ittin balessan mallaaqa uummataf ergamen ijarachaa jira. Kana malee yeroo galan seeran ala Dhaabii TPLF qabeenya dargiiti jeedhe kan samee dha malee essa iyuu kan fidee miti. TPLF Mallaaqii inni EFRTfi kene kun essa akka samamee enyu irra akka samamee essati akka walti qabamee ture ni beekna. Mallaaqii EFRT kun hundi isaa Oromiyaa keessa kan samamee ta’u isaa OPDOn ragga ba’aan amma iyuu jiru.
EFRT mallaaqa kanan seera daldalan ala dorgomi tokko malee waan hunda bituu fi mirga argate. Meeshaa biyya alatti galuu hunda ashura (qaraxa) tokko malee akka galchatuu mirga argate. Kubaniyaan kun wajjira Biroo Barnoota Oromiyaa irra ilee Milliona 100 ol seeran ala samee jira. Kubaniyaan OPDO Dinshoo kan jedhamuu EFRTn dorgomu danda’uu malaa jedhamee akka kasaruu goodhame jira. Lafa Dinshon Filamingo mana barumsa ASAYi jedhamuu fuula duraa Liziin bara Ali Abdo kantiiba ture bitatatee EFRTn dorgomuuf jeetani yaaltu jeedhe Saye Abirahaa Dinshoon mana akka hin ijjaranee dhorke, Dinshon wajjira keessati hojeetuu ilee ijjarachuu dorkamee Kisara bankiin qabeenyan isaa guguramee. Waldan Misoomma Oromiyaa Misoomma Oromiyaa irratti akka hin hojeene kan goocha ture EFRT ture. EFRT wagoota 25 darban gutuu qabeenya Oromiyaa hunda gure Tigiray galchee ture, TV, FRIJI fi Meesha wajjiralee Oromiyaa keessa jiran maqa “qabeenya ESAP” jeedhuun samee jira. Qabeenyi kun Hara ammoo Summii itti Oromoo fi Amhara baleesuuf Tigirayti kemikala nama fixuu homishuuf deema.
Kemikala lammii Fixuu danda’uu kubaniyaan dhunfa tokko atamiin homishuu danda’aa? Uummata Ethiopia yeroo amma kana homisha kemikala moo homisha nyatatu barbaachisa? Atamiin EFRT Kemikalaa nama fixuu kana homishuf hayama argatee? Ethiopian uummani millioon 20 utuu bela’a jirani, Mallaaqa Billiona 5 warsha Tigirayti ijarsisuuf maltu isaan kakasee? warsha kana kubaniya dhunfa EFRTf keenan ijarsisun siiridha?, yeroo amma, warshan kun homisha malii homishuuf dhabatee? Warshan kun Kemikala homishe malii irraa akka olchuu kan to’atuu jira? Partilee akka OPDO faa dhimma kana irratti yaada gaafataman jiru? Paarlamaan irratti mari’atee jira? Gaafii kana hundaf uummatni deebii argaachuu qaba.
Waan Uummani Ethiopia birroon hin beekne hojeechuun biyya tokko keessatti mootumma lama qabachuu dha. Kanaafuu sabi hundi damaquu qaba. Seera Adunyatiinu Warshan Kemikalaa kam iyuu homishuu kan mootumma ta’uu qaba, ykn kan Mootumman harka caalaa gahee keessaa qabu ta’ee bulchiinsa mootummatiin bulu ta’uu qaba. Kemikalaa kamiyuu biyya tokko keessatti homishamuuf yeroo yadamuu Paarlamaan biyyati, Partileen biyyati hunda fi Uummata biyyati ilee kan irratti mari’ate ta’uu qaba.
የኬሚካል ኢንዱስትሪው ላይምስቶን፣ ጨውና ሌሎች ጥሬ ዕቃዎችን በመጠቀም የተለያዩ ኬሚካሎችን እንደሚያመርት ተገልጿል፡፡ በዋናነትም በዓመት 60,000ቶን ፒቪሲ ሬዚን፣ 50,000 ቶን ኰስቲክ፣ ካልሲየም ካርባይድ፣ ክሎሪን አልካላይና ሌሎችም ኬሚካሎችን ለማምረት ዕቅድ ይዟል፡፡ Kemikali kun gosa kana qoofa miti kan hin caqasamiin jira. Gosi amma caqasamee kun iyuu tanan waan birra itti dabalani homishun bala qaqabsisuu danda’aa. Mootumman Syria warsha kemikala inni ittin homishee uummata ittin fixe hanga warsha EFRT kana humna hin qabuu ture. wagota 6 keessatti lubu namoota Milliona ta’aan fixee jira. Kemikala sanan nami midhame fayuu hin danda’uu. Mootumman Ethiopia biyya uummatni isaa waan nyatuu dhabee beela’aa jiruti, biyya uummani bishan dhuguu dhabee deebun dhumaa jirutii jalisii ijaree qoona babalisuu dhisee, bishan jalisee uummata obasuu dhisee kemekala Uummata fixuu warsha Adunyati argame hin beekne ijarun isaa yakka. Yakka kana hamaa ta’uu isaa kan mulisuu ammoo yeroo amma kana keessatu dubartin siila lamii ishee beelan dhumuuf gaduu qabduu homisha dhala nama fixuu ijaruuf murtefachuun Azeb Mesfin Adunya irratti dubarti gara jabeeti ishee tasisa. Waluma galati Tigiren lammii kamifuu gara kan hin laafnee ta’uu mulisa. Warshan Kemikala kubaniyaa dhunfaf yoomi ilee hayamamuu hin qabu, biyya Ethiopia saba fi sablamii 80 ol keessa jiratan keessatti warshan nama fixuu kun Tigire qoofaf hayamamun isaa kan nama gadiisisuuf seeran ala, paarlamaan biyyati iyuu seeran mormachuu qaba ture. TPLF hin hubane male Kemikali kun dura Tigirayin baleessa.
Mareen Russiaa fi Ethiopia turban darbe kun ammoo wa’ee Nucleara (TPLF of Ethiopia Nuclear Power) Wayyanne ta'uu mala.?
Doo’anoo Ministera Ethiopia kana dura, Belursi irratti “ Atomexpo Belarus 2016 international exhibition and conference.” Ethiopian Nuclear homishuuf Atomic Energy Russia waliin dubachuu ishee Interefax gabase jira. Russian Mallaaqa Arganan Ethiopia Abba Nuclear Adunya baleesuu goochuu akka dandeesuu shakiin tokko hin jiru. TPLF ammoo mallaaqa basuuf qoophidha mallaaqi wagga 25 gutuu samama ture Nuclear TPLF angoo irra tursuu ijaruuf waan qusatan hin qaban. TPLF fi Tigirayn waan angoo irra isaan tursuu hunda qoophefachuu irra gara boodatti hin deebi’aan. Utuu Oromiya keessatti Direen Xiyyaraa Bara Dargii kassee ijaramuuf Karoorifamee heedun utuu jiru Tigiray keessatti direen xiyyaraa 5 ijaramuu iraa iyuu xiyyara lola lafa jala kan quubachisuu ijaruun isaa, akkasumas meeshaa diree xiyyaraa Finfinne fi Diredawa jiru gara maqaleti guruun isaan maliif jeedhe kan bareesuu ykn kan dubatu hin jiru. Nuti yeroo kayyoo diini nu qoophese keessa lixnee wali irratti olola geggesa oluu Tigiren karoora itti Oromoo lafa irra baleesitu qoophefacha olti. Melese Zenawi Warsha Kemikala homishuu kana kan karoorfateef Egypt lola Ethiopia yoo barbaadee Bishan Abaya sumeesu akka danda’uu dubate ture. Egypt yoo nu lolte utuu Ethiopian Beloftuu Bishan Ethiopia dhuga, qurxumii fayya bishan keenya keessa guratee nyachuu hin dandeesuu jeedhe ture. Kana jeechun yoo nu loltan bishin dhugatii fi homisha laga abbaya irra argamu hunda summii itti goona jeechuu isaa ture. Malese Zenawi waan hojeetuu ni beeka akka itti hojeetuu ilee ni beeka, TPLF isheen hara’a garuu waan hojeetu hin beektu kemikala kana Egypt irratti fayyadamuu dhiifte lammi ishee ittin baleesuu dandessii. warii amma kun akka Melese ilee beekumsa hin qaban arabaa fi oftulumma male.
Oduun Ministera Russia akka ibsetti On April 24-26, Foreign Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Tedros Adhanom will pay a working visit to Russia. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov will hold talks with him on April 25. Mariin Moscow dhengada goodhamee hoo Ethiopian Nuclaer Power ijarachuuf mari’acha jirti lataa??? Uummani waan nyatuuu hin qabne “Nuclear” nyata yoo ta’ee malee nucleari ethiopiaf yeroo amma kana barbaachisa miti, Ibsaf yoo ta’ee bishan laga irra ibsan homishama jiru Ethiopia ni ga’aa.
Akka Argan Beekan yeroo darbe Facebook isaa irratti jeedhe barese ( “Osoo nuti, Oromoonni, yeroo, humnna fi qabeenya xiqqoo qabnu mootummaa United States kadhachuutti balleessaa jirruu, Wayyaaneen Nuclear power qabaachuuf halkan fi guyyaa carraaqaa jirti. Kanneen “Wayyaaneen kan nuclear power berbaaddu humnna elektrikaaf” jettan yoo jiraattan, motuummaan kun mootummaa “fertilizer” akka meeshaa polotikaatti dhimmi bahuun beekkame ta’uu isaan isin yaadachiisa. Wayyaneen “nuclear power” maaliif dhimma akka itti baatu eenyutu tilmmamuu danda’aa. Erga inni human nuclear argatee booda, hireen Oromoo hiree warra Plestine ta’a jechuu dha. Yeroo ammatti dhimmi Oromoo yaaddessuu qabu dhimma dimookraasii, mirga lammummaa ykn wayyanee wajjin aangoo qooddachuu miti; Akka ummataatti dandamachuu dha! “ Oromoo birroon akka argan Beekan kana dadafee itti yaaduu qaba. https://www.facebook.com/argan.beekan2?fref=ts) .
Russian Ethiopia abba Nucleara akka tatu goochuuf sababa bayee qabdi. Isaansi:-
1. Russian meesha qabduu fi Tecnology qabduu hunda gurgurachuun economi ishee cimsachuu barbaadi.
2. Russian TPLF akka yakkaa lammii Ethiopia irratti hojjeecha jirtu hin beektu TPLFn akkuma mootummaa Ethiopiatti ilaalti
3. Ethiopian biyyoota Araba fi Egyptn akka of irra dhorkituu barbaadi,
4. Kara Ethiopia Afrika irratti ilee dhiibbaa goochu barbaadi;
5. Russian Ethiopia waan hundan walitti dhufeenya addaa akka qabdutti ilaalti.
6. Russian Ethiopia USA jala basuu barbaadii
Russian yakkaa TPLF hojjeetuu hanga yoowonatti hin hubachiisin hafun ballessan kan koo fi kan ijjoolee Oromoo Russiatti baratanitti. Sababin isaa hayuun Oromoo Russiatti baratan bayee ta’ee utuu jiru Russian yakkaa TPLF Oromoo irratti dalagaa jirtu siiritti hubachiisuu dhabuun badii keenya malee badii Russia miti. Gara fuula duratti ni sirreffdana jeedhen abdadha.
Oduun Iterfax kun oduu haqa qabessa, dawwanaa Ministera dhima ala Ethiopia kana irrati kan xiyeefatee ta’uu isaaf ragga heeduu qabna.
Interfax News --------
Rosatom to hold talks on nuclear energy with Ethiopian officials in June (Part 2) MINSK. April 19 (Interfax) - Rosatom, Russia's state nuclear corporation will meet with representatives of Ethiopia in Russia in June as part of a dialog on nuclear energy, Rosatom deputy chief executive Nikolai Spassky told reporters on the sidelines of the Atomexpo Belarus 2016 international exhibition and conference."This was the first meeting. Ethiopia is our longtime, very interesting partner. The fact that it is showing interest in the development of both nuclear energy and non-energy applications is, of course, very serious," Spassky said, responding to a question about talks held in March.
"We've begun moving in this direction, we can't rush it," Spassky said.
Ogeesoon Oromoo dhimma kana siiritti beekani akka irratti hojeetan gaafacha nu ilee hanga dandeenyen qoorannoo keenya itti fufun yakki TPLF kun akka dhabatuu ykn akka kayyoon isa jijjiramuu goochisisuu qabna.